အမေရိကအတွက် ၀က်တုပ်ကွေးသတင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » အမေရိကအတွက် ၀က်တုပ်ကွေးသတင်း
Posted by kai on Nov 11, 2009 in Health & Fitness, U.S. News |0comments
ကယ်လီဖိုးနီးယားအပါအ၀င် ပြည်နယ်တွေမှာ လိုတာနဲ့ ပေးနိုင်တာမမျှလို့ပြသနာတွေတက်နေကြပါတယ်..။
ကျုပ်တို့လော့စ်အိန်ဂျလိစ်လဲ မလောက်ငှပါဘူး…မလောက်ဘူးဆိုပေမဲ့ ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဆင့်ဆင့်အရ ဆိုင်၇ာပြည်နယ်၊ မြို့ နယ်၊တွေ၊ ဆေးခန်းတွေဆီ ရောက်လာမှာတော့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အထူးသဖြင့် နှစ်ကုန် မြန်မာပြည်အလည်ပြန်မဲ့သူများ၊ နိုင်ငံခြားခရီးထွက်မဲ့သူများ မဖြစ်မနေ ကာကွယ်ဆေးလေးထိုးပြီး ထွက်ကြဖို့ နဲ့ အင်တာနက်မှာ ရနိုင်တဲ့နေရာတွေရှာဖွေကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်…။ အောက်မှာ ရှာနိုင်တဲ့ လင့်ခ်ပါ။
တချို့ ဆေးခန်းတွေမှာ ၂နှစ်အထက်ကလေးတွေအတွက် ဆေးတွေရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်..။ ကလေးတွေကို အမြန်ဆုံး ကာကွယ်ဆေးသွားထိုးပေးလိုက်ကြပါ..။
Federal Food and Drug Administration Commissioner Margaret Hamburg, M.D., has posted an open letter praising doctors, nurses, and other health professionals for their “extraordinary efforts” in responding to the 2009 H1N1 influenza outbreak, for which 41 million doses of vaccine has been allocated to the states with more becoming available every day.
“Althoughagap still remains between the demand for the vaccine and the currently available supply, this is the first time in history that any vaccine has been available at the time that an influenza pandemic has struck,” Hamburg writes.
Hamburg also gave details of the series of steps necessary for drug manufacturers to make the effective and safe “swine flu” vaccine strain with FDA oversight overasix-month period, resulting in the Sept. 15 licensing of four approved brands. The National Institutes of Health and vaccine manufacturers initiated clinical trials to determine the proper dosage for optimal immune response and for healthy adults, the elderly, and older children, one dose provides protection, while children ages nine and younger should get two doses, she reports.
The FDA chief encourages health professionals to report any unexpected or serious adverse effects believed linked to the 2009 H1N1 inoculations to the Vaccine Adverse Event Reporting System via the Internet at: http://vaers.hhs.gov/index. Other resources related to H1N1 activities are online at www.flu.gov.